प्लास्टिक फोहरले बायोडिजेलको निर्माणलाई अनुमति दिन्छ हरियो नवीकरणीय
प्लास्टिक फोहरले बायोडिजेलको निर्माणलाई अनुमति दिन्छ
एड्रियन | | Biodiesel, रिसाइकिलिंग
El प्लास्टिक यो एक सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा सामग्रीहरू हो र एकै साथ सबैभन्दा प्रदूषणकारी हुनेहरू त्यहाँ त्यहाँ वस्तुहरू, कन्टेनर र तत्वहरू छन् जुन उनीहरूसँगै निर्मित हुन्छन्।
धेरै जसो प्लास्टिक फोहोरको रूपमा समाप्त हुन्छन् र रिसाइकल हुँदैन जुन ठूलो गल्ती हो किनभने यसलाई उत्पादन गर्न प्लास्टिकको पुन: प्रयोग गर्न सम्भव छ। सस्तो ईन्धन र सबै क्लीनर भन्दा माथि। यो अनुमान गरिएको छ कि प्लास्टिकको फोहरका प्रत्येक टनको लागि लगभग 760० लिटर डिजेल उत्पादन गर्न।
पाइरोलिसिस भनिने प्रक्रिया प्रयोग गरिन्छ जसद्वारा प्राय सबै प्रकारका प्लास्टिकहरूको पुनर्चक्रण गर्न सकिन्छ।
पाइरोलिसिस प्रक्रियाले प्लास्टिकलाई वर्गीकरण गर्छ, त्यसलाई सानो भाँडामा राखिन्छ र उच्च तापमान चुलोमा नाइट्रोजन खुवाउँछ र भ्याकुम भित्र जलाउँछ। त्यसो भए यसले ग्यासलाई परिणत गर्दछ जुन तरल रूपमा परिणत हुन्छ, फिल्टर हुन्छ र यसले प्रदूषण गर्ने कम्पोनेन्टहरू हटाउँछ।
त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन् जुन यूरोप र संयुक्त राज्यमा दुबै उत्पादनको यस प्रकारको बनाउँदछन्।
ती मध्ये, Cynar बाहिर खडा छ, आयरल्यान्ड मा एक उपक्रम हो कि एक टन प्लास्टिक संग 665 लिटर प्लास्टिक उत्पादन गर्न सक्छन्। डिजेल, १ 190 ० लिटर पेट्रोल र ker। केरोसिनको लागि।
यस सिंथेटिक तर समान कुशल ईन्धनको उत्पादन विस्तार मा निर्भरता कम हुनेछ पेट्रोलियम, जुन धेरै देशहरूको लागि ठूलो समस्या हो।
प्लास्टिकलाई ईन्धनमा रूपान्तरण गर्नका लागि केही भेरियन्टसँग अहिलेसम्म एउटै मात्र विधि छ।
बिस्तारै, यसले इन्धन बनाउनको लागि प्लास्टिकको प्रयोगमा दांव लगाइरहेको छ, जसले एकातिर दुई समस्याहरूको समाधान गर्दछ, एकातिर प्लास्टिकको फोहोर र अर्कोतिर तेलको अभाव र जीवाश्म ईन्धन.
आउँदो वर्षहरुमा, यस प्रकारको उद्योग निश्चित रूप मा दुनिया भर मा अधिक विकसित हुनेछ।
प्लास्टिक एक अत्यधिक प्रदूषित सामग्री हो जसले वातावरणलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउँछ, त्यसैले तपाईंले यसको प्रयोग घटाउने प्रयास गर्नुपर्दछ र मात्र यो प्रयोग गर्नुहोस् बायोडिग्रेडेबल.
स्रोत: मलाई पुन: साइकल गर्नुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » जैव ईंधन » Biodiesel » प्लास्टिक फोहरले बायोडिजेलको निर्माणलाई अनुमति दिन्छ
प्लास्टिकको फोहोरको साथ ईन्धन कसरी बनाउने
जिमी अन्तेजाना जी। भन्यो
म कहाँ २ 250० किलोग्राम प्रति घण्टा क्षमताको मेशिन प्राप्त गर्न सक्छु जसले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल उत्पादन गर्छ?
जिमी एन्टेजाना जी लाई जवाफ दिनुहोस्।
डायपर पुन: साइकल गर्नुहोस् र बायोग्यास उत्पादन गर्नुहोस्
खाद्य र बायोडिग्रेडेबल कपहरू